Dhowr duug oo burush qaro weyn leh si uu u qaabeeyo shimbirahan saliida lagu rinjiyeeyay | Abuurista khadka tooska ah
Dhowr jeer oo dhakhso ah buraash si dhaqso ah loogu sameeyo rinjiyeynta saliidda shimbiraha
Dhowr istaroog oo degdeg ah, Angela Moulton waxay abuuri kartaa rinjiyeynta saliidda muuqaalka leh ee shimbiraha. Farsamo dhibkeedu adag yahay iyo middaas oo ay ugu mahadcelinayaan rinjigaas ku duuban meelahaas buraashka degdega ah, ayaa abuuri kara dareen gargaar.
Moulton sidoo kale wuu ina tusayaa xiisaha uu u qabo noolaha baalasha leh in aan ka heli karno jardiinooyinka iyo jardiinooyinka iyo midabka buuxa ee saliidda, waxay wadaagaan midabka muuqda ee mid kasta oo ka mid ah sawirradiisa.
Quruxda fanka ayaa ah in fanaan kastaa awood u leeyahay inuu wax bixiyo nuance iyo taabashadiisa mowduuc gaar ah, taasna waxay suurtogal u ahayd xarunta boqolaal ka mid ah tobanaan sano iyo qarniyo badan.
Dareenkiisa ugu weyn waa isticmaalka saliidda rinjiga shimbiro midabbo leh oo ku yaal shiraac. Xirfadlayaal ka soo qaadata dabeecadda iyo midabkeeda lafteeda si ay noo tusto qaabkeeda fahamka liqida iyada oo ku saleysan dhowr burush oo si wanaagsan loo siiyay iyo qaabkeeda.
Thanks to farsamadan waxaan ku baran karnaa iyada iyo iyada burushyada kaliya sidaas darteed in yar, oo leh burush ka gudbi kara lambarka 14, Waxaan ka fikiri karnaa shaqooyinka farshaxanka leh ee ka buuxan iftiinka iyo midabka shimbirahaas ay Moulton sidoo kale sawireyso.
Farshaxan yaa waqtigiisa wuxuu ku qaataa inta udhaxeysa Illinois iyo Idaho iyo inuu iibiyo shaqadiisa asalka ah isla markaana uu daabaco qaybo farshaxankiisa ka mid ah. Waad eegi kartaa Farshaxanka Pratt Creek oo aan helo shaqadiisa uu u diyaariyo qof walba si uu awood ugu yeesho inuu nuqul ku haysto gurigeenna sidaasna ugu qurxiyo mid ka mid ah qolalkayaga sida ugu fiican.
Waxa kale oo ay u adeegsataa barxad sida YouTube-ka u ah muuji sida aad shaqadaada ugu qabatid burush qaro weyn nuances buuxa Waan kuu daayey adiga Johan Scherft midabbada biyaha ee shimbiraha, sidoo kale waxaa ka buuxa nuunisyo iyo qurux aad u wanaagsan iyo waliba xariifnimo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Fanaaniin » Dhowr jeer oo dhakhso ah buraash si dhaqso ah loogu sameeyo rinjiyeynta saliidda shimbiraha
Tung Ming-Chin ee farshaxanno alwaax ah oo umuuqda inay dad ku jiraan
Adobe wuxuu ku dhawaaqay magaca waxa uu ugu yeeray mashruuca Gemini: Adobe Fresco